प्रधानमन्त्री ओलीको भविष्य! :: Setopati
अमित ढकाल काठमाडौं, वैशाख १२
दोस्रो, पार्टी फुटाएर पछि चुनावमा जाँदा वा परिस्थिति आफ्नो काबूमा रह्यो भने सिंगै नेकपा आफ्नै नेतृत्वमा आउँदो संसदीय चुनावमा जाँदा जति धेरै मधेसी दलका सांसद आफूसँग भयो, मधेसमा त्यति सजिलो।
पार्टी निर्माण क्रममा भोकले चस्केका पेट, दिनभर हिँडेर दुखेका खुट्टा, पुलिस-सेना आमने-सामने हुँदा ढक्क फुलेका मुटुहरूको कथा हो, नेकपा। जस्तोसुकै प्रतिकूलता बाबजुद आफ्नो सपना जारी राख्ने असंख्य कार्यकर्ताको साहसको कथा हो आजको नेकपा। कुनै एक व्यक्तिले केही दिन लगाएर लेखेको तीनघन्टे 'र्‍याम्बो' सिनेमाको पटकथा त पक्कै होइन नेकपा, जहाँ एउटा मात्र हिरो छ!
त्यसैले, नेकपाजस्तो विशाल पार्टी प्रधानमन्त्री ओली वा अरू कुनै एक नेताको निजी सम्पत्ति हुन सक्दैन।
प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष भएपछि नेकपालाई सन्तुलित रूपले अघि बढाउने दुइटा बाटा थिए ओलीसँग।
प्रधानमन्त्री ओलीले एक जना प्रतिपक्षी दलका नेतासँग भनेको कुराले पनि आफ्ना समकक्षी नेताप्रति उनको हेयभाव झल्काउँछ। आफ्ना सहकर्मी नेताबारे उनले केही महिनाअघि ती प्रतिपक्षी नेतासँग भने, 'झलनाथ झल्लू हो, त्यसको काम छैन। माधव नेपाल क्लर्क हो, त्यसको कुनै ल्याकत छैन। प्रचण्डलाई पूर्व एमालेले मान्दैनन्। ईश्वरजीले यसो प्रयास गर्दैछन्, पारा ल्याएका छैनन्। कुनै भेउ पाएका छैनन्।'
मैले उनलाई सोधेँ, 'प्रधानमन्त्रीले आउने चुनाव र महाधिवेशनपछि म नेतृत्वमा बस्दिनँ, तपाईंहरू मिलेर वा प्रतिस्पर्धा गरेर पार्टी वा संसदीय दलको नेतृत्व लिनुस् भनेर प्रचण्ड र नेपाललाई भने त झगडा सकिहाल्छ नि। प्रधानमन्त्री त्यसो गर्न राजी हो?'
यस्तो प्रधानमन्त्री जसले आफ्नै बहुमत सांसदले मलाई जुन बेला पनि हटाउन सक्छन्, त्यस्तो बेला मैले अर्को पार्टी खोल्नुपर्छ भनेर राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए, उसलाई तिनै सांसदको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा कायम रहने नैतिक अधिकार छ कि छैन?
बुधबार साँझसम्म माहोल बदलिसकेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अध्यादेशको चर्को विरोध गरिसकेको थियो। सरकारले समाजवादी पार्टी फुटाउन सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको चर्चा चलिसकेको थियो। राति अबेर पार्टी फुटाउने खेल उत्कर्षमा पुग्यो।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख १३, २०७७, ०४:००:००